Saddex Senator oo kismaayo uga dhawaaqay in ay difaacayaan madaxbanaanida doorashada Jubbaland – Kalfadhi
Senatorro katirsan Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, degaan doorashadoodana ay tahay magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose ayaa sheegay in ay door wayn ka qaadanayaan doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacday degaanada maamulka Jubbaland.
Senatorradaan oo kala ah Axmed Xaashi, Iftin Xasan Baasto, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag), ayaa magaalada Kismaayo ka sheegay in ay jirto faragelin dowladda Soomaaliya ay ku heyso doorashada Jubbaland islamarkaana ay dooneyso in ay dad geysato sidii ka dhacday doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya.
“DF-ka Soomaaliya waxay dooneysaa in ay faragelin ku sameyso doorashada Jubbaland sidii doorashadii KGS ay keynsato musharax ku soo baxa” ayuu yiri Senator Iftin Xasan Baasto oo katirsan Xildhibaanada Aqalka Sare ee laga soo doortay Jubbaland.
“Musharaxiinta ka been sheegay Kismaayo ee amni darrada sheegay waa kuwa ka soo horjeeda daganaanta iyo nabad galyada Kismaayo mana u ogolaan karno in ay hogaamiyaan bulshada Jubbalnd” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Senator Iftin Xasan Baasto oo katirsan baarlamaanka Aqalka Sare.
Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, ayaa sheegay in Senatorrada Aqalka Sare ee laga soo doortay Jubbaland ay dowladda Soomaaliya ka difaaci doonaan in ay waxay rabto ka sameysato doorashada Jubbaland ee dhamaadka sanadkaan lagu wado in ay ka dhacdo Jubbalnd.
“Uma ogolaan doono in dowladda soo farageliso doorashada Jubbaland annaga ayaana ka hortaagan oo wakiilo idin ah” ayuu yiri Senator Fartaag oo kismaayo kula hadlay Warbaahinta. “ waxaan ognahay wixii ka dhacay Baydhabo sidaas darteed waa qasab in aanan u ogolaanin wax faragelin ah Dowladda Soomaaliya” ayuu hadalkiisa sii raaciyay C/llaahi Sheekh Ismaaciil oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya.
C/llaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in shaqsiyaad gaar ah ay doonayaan in magaalada Kismaayo ay ka abuuraan qal qal amni iyo xasilooni darro sida magaalada Muqdisho.
“Kismaayo waxaan dhax socdaa ilaalo la’aan halka Muqdisho adigoo ilaalo wato aad baqayso amnigaas waxaa ka soo horjeeda shaqsiyaad Soomaaliyeed oo reer jubbaland ah iyo DF-ka mana u ogolaan doono” ayuu yiri Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo katirsan xubnaha Aqalka Sare ee baarlamanka Soomaaliya.
Maamulka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay doorasho ka dhacdo dhamaadka sanadkaan 2019 waxaana Kismaayo iyo guud ahaan Soomaaliya ka socda u diyaar-garowga doorashada Maamulkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay soo saartay habraaca doorashada degaanada maamul Gobaleedyada taas oo la sheegay in Xukuumadda ay dooneyso in ay ku maamusho doorashooyinka ugu soo horreyo maamul gobaleedayda dalka.